Ithegi: Uhlalutyo lwebhokisi engenayo | Martech Zone
Maka: uhlalutyo lwebhokisi lemiyalezo engenayo
Buyisela iNdlela vs 250ok: Ukuhanjiswa kwe-imeyile isoftware kunye neenkonzo
NgoLwesibini, Agasti 16, 2016 NgeCawa, nge-15 kaJanuwari 2017 Douglas Karr
Kutheni le nto ukuhanjiswa kwe-imeyile kubalulekile? NgokweNgxelo yeXabiso leDatha ye-imeyile ka-2015 ngamava, i-73% yabathengisi baxele ukuba banemicimbi yokuhanjiswa kwe-imeyile. Indlela ebuyayo ixele ukuba ngaphezulu kwe-20% ye-imeyile esemthethweni iyalahleka. Ngaphandle kwamathandabuzo, amashishini ajongana neengxaki zokuhanjiswa, kwaye oko kunefuthe elibi kumgca ongezantsi. Iminyaka, i-Return Path ibiyinkokeli yeshishini kwindawo yokuhanjiswa kwe-imeyile ngaphandle kokhuphiswano oluninzi, ukuba lukhona. Ngokufika kwama-250ok, kunye no
Fumana uVavanyo lwaSimahla lweBlog yakho okanye yeSiza
NgoLwesibini, Septemba 7, 2010 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Ubeke umzamo omkhulu kwindawo yakho yeshishini okanye kwibhlog yebhizinisi, lixesha lokuba uyilungise. Sabhala ukubhloga ngokuBumbeneyo kwiiDummies ukunceda amashishini ukuba aphucule iibhlog zabo zokwakha igunya kunye nokufumana izikhokelo kwi-Intanethi. Nangona le ncwadi igxile ekubhlogweni nasekubhaleni amaqonga, ithiyori yandisa iwebhusayithi ebumbeneyo ukuya kuthi ga kwiphepha lokuhlawulwa lokucofa. Uninzi lwenu sele luqalile ukuyifunda le ncwadi kwaye ingxelo ibikhona
Tuesday, September 7, 2010 Sunday, October 4, 2015